म कसरी लिंक्डइन भिडियोको साथ बी2बी व्यापारको लाखौं डलर बनाउने | Martech Zone
म कसरी लिंक्डइन भिडियोको साथ बी2बी व्यापारको लाखौं डलर बनाउने
बिहीबार, डिसेम्बर 10, 2020 बिहीबार, डिसेम्बर 10, 2020 ज्याकी हर्मेस
भिडियो दृढताका साथ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग उपकरण मध्ये एकको रूपमा यसको स्थान कमाएको छ व्यापारहरूको 85% भिडियोको उपयोग उनीहरूको मार्केटिंग लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न। यदि हामी B2B मार्केटिंगमा मात्र हेर्छौं भने, Marke% भिडियो मार्केटरहरू रूपान्तरण दर सुधार गर्न को लागी LinkedIn लाई एक प्रभावी च्यानल को रूप मा वर्णन गरेको छ।
यदि B2B उद्यमीहरू यस अवसरको फाइदा उठाएनन् भने, तिनीहरू गम्भीर रूपमा हराइरहेका छन्। लिंक्डइन भिडियोमा केन्द्रित व्यक्तिगत ब्रान्डि strategy रणनीति निर्माण गरेर, म मेरो व्यापार कोष बिना एक मिलियन डलर भन्दा बढी गर्न सक्षम भयो।
लिंक्डइनका लागि प्रभावकारी भिडियो सिर्जना गर्नु मानक भन्दा पर जान्छ मार्केटिंग भिडियो सल्लाह। LinkedIn भिडियोहरू सिर्जना गर्न र विशेष रूपमा प्लेटफर्मको लागि अप्टिमाइज गर्न आवश्यक छ सही दर्शकहरूमा पुग्नको लागि र वास्तविक प्रभाव पार्न।
यहाँ के मैले B2B कम्पनी निर्माण गर्न लिंक्डइन भिडियो प्रयोग गर्ने बारे सिकेको छु (र मेरो इच्छा के हो भनेर जान्न चाहन्छु)।
ड्राइभि Results् नतिजा
म upping गर्न प्रतिबद्ध मेरो लिंक्डइन भिडियो खेल करिब दुई वर्ष पहिले मैले कम्पनी पोष्टहरूको लागि भिडियोहरू सिर्जना गर्न डब्बल गरें, तर व्यक्तिगत ब्रान्डि me मेरो लागि पूर्ण नयाँ थियो। म लिंक्डइन भिडियोहरू सिर्जना गर्न सोच्न प्रयोग गर्थें वाइटबोर्डको अगाडि सही आसनको साथ उभिएर र स्पउटि off (स्पष्ट रूपमा लिपि) इनबाउन्ड मार्केटिंग ज्ञान। मैले मेरो रणनीतिलाई स्थानान्तरण गरें र बढि अनौपचारिक भिडियोहरू सिर्जना गर्न थालें जुन म उद्योगको अंशहरूको बारेमा कुरा गर्छु जुन मलाई थाहा छ र म माया गर्दछु।
मेरो व्यापार बेच्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, मैले गम्भीरतापूर्वक ल्याउनमा ध्यान दिएँ मेरो श्रोताको लागि मूल्य। मैले अधिक भिडियोहरू सिर्जना गर्न जारी राखें, आफूलाई मार्केटिंग, व्यवसाय, व्यवस्थापन र उद्यमशीलतामा विषय विशेषज्ञको रूपमा स्थापित गर्दै। लगातार पोष्टिंग र नियमित अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट, मैले मेरो दर्शकहरूलाई केहि महिनाहरूमा ठूलो मात्रामा वृद्धि गरें: यो अब 70,000०,००० अनुयायीहरूमा पुगेको छ!
मेरो भिडियो रणनीति पिभोट (र अलि व्यक्तिगत पाउनको लागि मेरो इच्छुकता) नयाँ लीड्सको टनको रूपमा भुक्तान गरियो। आफैंलाई त्यहाँ बाहिर राखेर र मेरो जीवनको बारेमा कुरा गरेर, मानिसहरूले मलाई चिन्न सक्छन्, उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तिनीहरू सोच्छन् कि तिनीहरू हामीसँग काम गर्न योग्य छन्, र बिक्री प्रक्रिया बिजुली छिटो सर्दछ। जबसम्म यी लिंक्डइन सम्भावनाहरू मेरो कम्पनीको वेबसाइट भ्रमण गर्न वा मसँग पुग्न शुरू भए, तिनीहरू पहिले नै न्यानो सीसा थिए। आजको दिनसम्म, मेरो कम्पनीले लिंक्डइनबाट आएको सुराकीबाट करोडौं डलर भन्दा बढी करारमा हस्ताक्षर गर्यो।
जबकि मसँग एक शानदार टोलीको मद्दत छ जुन ती अग्रणीहरूलाई पोषण दिन्छ, सीसा जेनेरसन एक ठूलो पहिलो चरण हो it र यसलाई बलियो लिंक्डइन भिडियो रणनीति चाहिन्छ।
दृश्य कथा भन्दै
लिंक्डइन भिडियोहरू बताउनको लागि एक उत्तम तरिका हो बाध्यकारी, दृश्य कथाहरू तपाईंको व्यक्तिगत ब्रान्ड र तपाईंको व्यवसायको बारेमा। जबकि दुबै स्वरूपहरू उत्कृष्ट छन्, तपाईं प्राय जसो ब्लग पोष्टमा भन्दा भिडियोमा तपाईंको ब्रान्डको बारेमा धेरै कुरा बताउनुहुन्छ।
भिडियोको मूल्यमा तपाईं कुन दृश्य / श्रव्य रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ त्यसमा निहित हुन्छ। भिडियोले व्यक्तिलाई तपाईंसँग सम्पर्क गर्न र तपाईंलाई जान्न पनि अनुमति दिन्छ किनभने उनीहरू तपाईंको शरीरको भाषा र तपाईं बोल्ने तरिकाबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। धेरै व्यक्तिले मलाई भनेका छन् उनीहरूलाई त्यस्तो लाग्छ कि मैले लिंक्डइनमा साझेदारी गरेको भिडियोहरू हेरेर उनीहरू मलाई पहिल्यै चिनेकै थिए।
जब तपाई स्पिकरको स्वर र भावना सुन्नुहुन्छ उही सन्देश धेरै फरक तरीकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ। सामाजिक मिडिया स्न्याप्ट टेक्स्ट पोष्टको केन्द्रबिन्दु हो, तर भिडियो अधिक प्रामाणिक महसुस गर्दछ। भिडियोले सोशल मीडियामा बनेको "हाइलाइट रील" लाई पनि मानवीय बनाउँछ। तपाईंले एक सानो बडबड गर्नुपर्नेछ, भिडियो साझेदारी गर्न केहि अलि वास्तविक — एउटा पाठ जुन मैले यस गत बर्षमा निरन्तर सिकेको थिएँ, पृष्ठभूमिमा घरबाट तीन बच्चाहरूको साथ भिडियोहरू खिच्दै गर्दा।
तपाइँको आदर्श श्रोताको खेती गर्दै
उस्तै सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू जुन हामी अन्य मार्केटिंग च्यानलहरूमा लागू गर्दछौं, यहाँ पनि लागू हुन्छ; अर्थात्, कि तपाइँ तपाइँको श्रोताको बारेमा रणनीतिक हुनुपर्दछ, र तपाइँले मानिसहरूलाई हेरचाह गर्न कारण दिनुपर्दछ।
जति धेरै हामी सोच्न चाहन्छौं कि फराकिलो जाल कास्टिंगले बढि नेतृत्व लिन्छ, हामी जान्दछौं त्यो सत्य होइन। लिंक गरिएको भिडियो बनाउँदा तपाइँ तपाइँको श्रोताको बारेमा जानबूझ्नु पर्छ। तिमी कोसँग कुरा गर्दै छौ? जबकि तपाईले सँधै लिखित सामग्रीलाई विशेष व्यक्तित्वमा निर्देशित गर्नुपर्दछ, एक विशिष्ट दर्शकलाई दिमागमा राख्नु भएको जो तपाई शाब्दिक रूपमा सम्बोधन गरिरहनु भएको बेलामा यसले तपाईंलाई अझ आकर्षक सामग्री क्राफ्ट गर्न मद्दत गर्दछ।
एकचोटि तपाईंले यो कुरा गरिसक्नुभयो कि तपाईं कससँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंलाई एउटा सन्देश आवाश्यक हुन्छ जुन गुंज्याउनेछ। तपाईंलाई थाहा छ के निश्चित रूपमा गुन्जाउँदैन? तपाईंको उत्पादन वा सेवाको विवरण। तपाईंले व्यक्तिलाई दिनु आवश्यक छ ख्याल गर्ने कारण तपाईको कम्पनीको बारेमा तपाईले कुरा गर्नु भन्दा पहिले। तपाईंको कम्पनीको थोरै उल्लेखको साथ शैक्षिक सामग्री बनाउनेमा फोकस गर्नुहोस्।
तपाईंले फिल्म बनाउन सुरु गर्नु अघि, आफैलाई सोध्नुहोस्:
मेरो दर्शकले के ख्याल राख्छ?
मेरो दर्शकहरु केमा चिन्तित छन्?
लि audience्कइनमा मेरो दर्शकहरू केबारे जान्न चाहन्छन्?
याद गर्नुहोस्: दर्शकहरूको खेती रोकिदैन जब तपाईं 'पोष्ट' मा हिट गर्नुहुन्छ। तपाइँ पछाडिको अन्तमा तपाइँको दर्शकलाई पनि निर्माण गर्न आवश्यक छ अन्तर्क्रिया गरेर (र साँचो चासो लिएर) तपाइँको लक्षित बजार।
यो सुनिश्चित गर्न कि तपाईंले लक्षित दर्शकहरूले वास्तवमा तपाईंको भिडियो देख्दछन्, यो पहिले जडानहरू हुन मद्दत गर्दछ। मेरो टोली र म प्रत्येक उद्योगमा संभावनाहरूको सूची सिर्जना गरेर र उनीहरूलाई हाम्रो नेटवर्कमा सामेल हुन आमन्त्रित गरेर यसो गर्दछौं ताकि उनीहरूले फिडमा हाम्रो सामग्री देख्न सक्नेछन्। तिनीहरू नियमित रूपमा हाम्रो ब्रान्ड र हाम्रो मूल्य सम्झिन्छ हामी स्पष्ट रूपमा बेच्न बिना।
तपाइँको लिंक्डइन भिडियो रणनीति सिर्जना गर्दै
तपाईंको व्यक्तिगत र कम्पनी ब्रान्ड निर्माण गर्न तपाईंको आफ्नै लिंक्डइन भिडियो सिर्जना गर्न सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ? यसलाई पसिना नलगाउनुहोस् - यो सजिलो छ सुरु गर तपाईले सोचे भन्दा
यहाँ केही सुझावहरू छन् जुन मैले विगत २ बर्षमा प्रभावी लिंक्डइन भिडियो सिर्जना गर्ने बारे सिकेकी छु - महामारीको बखत १० महिनाको विकास भिडियो सहित:
यसलाई ओभरसिन्क नगर्नुहोस्। केवल क्यामेरा खोल्नुहोस् र शूट गर्नुहोस्। म मेरो आफ्नै भिडियोहरू पनि देख्दिन किनकि म आफै अलग छुन्छु।
बिहान पोष्टहरू साझेदारी गर्नुहोस्। तपाईं साँझ भन्दा बिहान धेरै सment्लग्नता देख्नुहुनेछ।
उपशीर्षकहरू थप्नुहोस्। व्यक्तिहरू आफ्नो फोनमा वा अरूको वरिपरि हेरिरहेका हुन सक्दछन्, र सुन्न भन्दा पढ्दछन्। यो पनि एक पहुँच उत्तम अभ्यास हो।
हेडलाईन जोड्नुहोस्। तपाईं उपशीर्षकहरू थप्दा, तपाईंको भिडियोमा ध्यान आकर्षण गर्ने हेडलाईन थप्नुहोस्
व्यक्तिगत पाउनुहोस्। मेरा पोष्टहरू जुन वास्तवमै राम्रो काम गरीरहेका छन् असफलताको बारेमा थिए, प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै र कठिन परिस्थितिहरूलाई सम्हाल्ने।
मूल हुनुहोस्। मैले भिडियो श्रृ series्खला पोस्टिंगमा प्रयोग गरें तर केहि नयाँ भन्नु (बिभिन्न शीर्षक र थम्बनेलको साथ) सबैभन्दा आकर्षक छ।
प्रतिलिपि सहित पूरक। व्यक्तिले तपाईंको पूर्ण भिडियो नहेर्न सक्छन्, र त्यो ठीक छ! तपाइँलाई तपाइँको पोष्टमा रहनको लागि कारण दिनुहोस् र बाध्यात्मक प्रतिलिपि थपेर संलग्न गर्नुहोस्।
तपाईंको B2B ब्रान्ड बढाउन र प्रतिस्पर्धात्मक रहनको लागि, तपाईंले लिंक्डइन भिडियो प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले आफ्नो आँखा बन्द र मा हाम फाल्नुहोस्! एकचोटि तपाईंले पोस्ट गर्न सुरू गर्नुभयो भने, तपाईंले विश्वास गर्नुहुने छैन कि तपाईंले चाँडै अपलोड गर्नुभएन।
LinkedIn मा ज्याकी हर्मेस अनुसरण गर्नुहोस्
टैग: b2bb2b भिडियोb2b भिडियो रणनीतिज्याकी हर्मेसLinkedInलिin्कडिन अनुयायीहरूलिin्कडिन मार्केटिंगलिंक गरिएको भिडियोमूल्यभिडियो मार्केटिंगदृश्य कथा कथन
ज्याकी हर्मेसका सीईओ हुन् एक्सेलिटी, मिलवाकी-आधारित एजेन्सी जसले सफ्टवेयरको रूपमा एक सेवा (सास) स्टार्टअपलाई राजस्वमा पुग्न मद्दत गर्दछ र छिटो बढ्न, र यसको सह-संस्थापक महिला उद्यमशीलता हप्ता। धेरै सक्रिय छ LinkedIn, ज्याकीले दैनिक जीवन र बुटस्ट्र्याप कम्पनीको बढ्ने चुनौतीहरूको बारेमा छलफल सुरु गर्दछ। ज्याकी सल्लाहकारहरूको माध्यमबाट विद्यार्थीको स्टार्टअपहरू Commons, को एक सह आयोजक हो स्टार्टअप मिलवाकी इमर्ज, र एक सल्लाहकार संग गोल्डन एन्जिल्स लगानीकर्ता। उनको व्यावसायिक संलग्नताको अतिरिक्त, ज्याकी एक धर्मपिता आमा र भविष्यका पायलट हुन्।
कसरी प्रकाशकहरूले टेक्स्ट स्ट्याक तयार गर्न सक्छन् एक बृद्धि भंग गरीरहेको दर्शक सम्म पुग्न
सुझाव: गुगल स्टक खोजीको साथ तपाईको स्टक फोटो साइटमा उस्तै वैक्टर छविहरू कसरी फेला पार्ने